सरकारले अप हरण गरेको दावी गरिएका समाजवादी पार्टीका नेता यादव सरकारी घेराबाट फरार, अन्य नेता मेरियटमा ब-न्धक – Ktm Dainik
सरकारले अप हरण गरेको दावी गरिएका समाजवादी पार्टीका नेता यादव सरकारी घेराबाट फरार, अन्य नेता मेरियटमा ब-न्धक - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सरकारले अप हरण गरेको दावी गरिएका समाजवादी पार्टीका नेता यादव सरकारी घेराबाट फरार, अन्य नेता मेरियटमा ब-न्धक
पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादव काठमाडौको मेरियट होटलबाट फरार हुनु भएको छ । तत्कालिन समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका डा. यादव सरकारी पक्षले बनाएको घेरा तोडेर निस्कन सफल भएको पार्टीका नेता विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनु भएको छ । विहान झण्डै आठ बजेतिर उहाँ होटलबाट लुकेर भाग्नु भएको र आफ्नो सम्पर्कमा रहेको पाण्डेले दावी गर्नुभएको छ ।
सामाजिक संजालमा उहाँले लेख्नु भएको छ,“सुरेन्द्र यादवलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न उहाँलाई लिन म जाँदैछु । यादवजी पिएसओलाई पनि झुक्याएर निस्कन सफल हुनुभएको छ । ओली गुन्डागर्दी हद भो, अब ओलीलाई विदा गरौं ।” उहाँका अनुसार पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र व्यापारी किसान श्रेष्ठ काठमाडौंबाट प्रमको निर्देशनमा सुरेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाउने हो हिँड्नुस्भन्दै दबाब दिँदै ओलीसँग फोनमा कुरा पनि गराएर सरकारी गाडीमा जनकपुरबाट काठमाडौ ल्याइएको उहाँले दावी गर्नु भएको छ ।
आफ्नो पार्टीका नेतालाई सरकारले गुण्डागर्दी शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको र पार्टी भित्र चलखेल गरेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले हदभन्दा बढी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । पाँचतारे मेरियट होटल, नक्सालमा समाजवादी पार्टीका सांसदहरुलाई ओलीको तर्फबाट हिजोबाट खान बस्न सबै व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । होटलको ७०१ देखि ७१५ सम्मका कोठामा समाजवादीका सांसदहरूलाई, केहीलाई डर, केहीलाई मन्त्री पद र केहीलाई आर्थिक लगायत प्रलोभन देखाएर, राखिएको पाण्डेले बताउनु भएको छ । होटलमा रेणु यादव, इस्तियाक सहितको टीमलाई राखिएको उहाँको भनाई छ ।
उनीहरुलाई भेट्न र सरकारी घेरा तोड्न समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई अहिले होटलमा गएको पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
होटलबाट भाग्नु भएका पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवलाई हिजो बेलुका पाँच बजे जनकपुरबाट सरकारी सुरक्षासहित काठमाडौ ल्याइएको थियो ।
समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले पनि सरकारले नै उनको अ पहरण गराएको आरोप लगाउनु भएको छ । पेशाले चिकित्सक समेत रहेका यादव महोत्तरीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, वैशाख ११ २०७७ ०९:०६:४४